Izikhala ezi-20 ezihamba phambili zokuvakasha zezithandani zezimpelasonto zempelasonto eFlorida
- Izindawo ezihamba phambili zokuphumula zabashadikazi -
Jabulela isikhathi esithile nomunye wakho obalulekile kulezi zindawo ezinhle zaseFlorida. IFlorida inikeza inhlanganisela enkulu yamabhishi esihlabathi esimhlophe, isimo sezulu esimnandi, namahhotela kanokusho ohambweni lokuthandana nomuntu omthandayo.
Hlela ukuphunyuka okunethezeka kwababili kwenye yalezi zindawo zokungcebeleka zaseFlorida futhi wenze izinkumbulo eziyohlala impilo yakho yonke. Funda le ndatshana ngokuningiliziwe ku-Best Vacation Spots for Couples.
Njengenye yezindawo eziphezulu zokubalekela e-US, iFlorida ayinikeli mkhawulo wezinye izindlela maqondana nokuhlelwa okuphawulekayo kokuphela kwesonto.
Akunandaba noma ngabe bafuna ukuchitha isikhathi ukuvakasha okuphelele kokuphela kwesonto noma ukuhlehla kombhangqwana osuka enhliziyweni (noma ukuthola ama-aways aseFlorida, ngaphandle kwalokho), cishe abantu abayizigidi eziyi-125 bavakashela i-expression minyaka yonke.
Ukudonsa okukhulu? Ngempela, okokuqala, iFlorida inikeza ukukhanya kwasemini okuningi namazinga okushisa afudumele ngokungaguquki. Ngemuva kwalokho, ngaleso sikhathi, kunogu lolwandle oluningi lombuso.
Uhambo lwaseFlorida lolwandle lungajatshulelwa kakhulu kunoma iyiphi indawo, kusukela eBeg kuya eNyakatho nasezindaweni eziqhele kakhulu zolwandle lwase-Inlet nase-Atlantic - ngisho nasezulwini elincane elishisayo laseKey West.
Izindawo ezi-20 ezihamba phambili zokuvakasha zabashadikazi eFlorida
Nazi ezinye zezindawo ezihamba phambili zokuvakasha zabashadikazi eFlorida, lapho imibhangqwana ingakhululeka khona, ijabulele impelasonto yokuphumula, iphinde ixhumane kabusha endaweni yothando ezungezwe amabhishi amahle nokushona kwelanga okukhazimulayo.
1. Izindawo ezihamba phambili zokuvakasha zezithandani: uSt. Augustine
Qonda ku-St. Augustine uma wena nomlingani wakho ophelele nithanda umlando. Iqanjwe ngegama lokuthi yi-Antiquated City ngenxa yokuthi yasungulwa ngo-1565, indawo ehlala abantu abanesikhathi eside ehilelekile e-US ilayishwe izindawo ezikhangayo zaseSpain okufanele zibhekwe.
Qala ukuvakasha kwakho uphenya indawo eyaziwayo yaseSt.
Bese, ngaleso sikhathi, faka amandla ejele elibizwa ngokufanele ngokuthi yi-Old Prison ngaphambi kokuvakashela iPonce de Leon's Wellspring of Youth Archeological Park, lapho wena nomlingani wakho wempilo ningaphuza khona kumaphayona asendulo entwasahlobo amukelwayo ayenobutha nezakhiwo ezikhulayo.
Ukuze uthole uhlaka lwezindawo ezibalulekile ezifana nalezi, landela ukuhambela okuqondisiwe okuqondisiwe.
2. I-Orlando Theme Parks
Ngokuphathelene nokuhamba nezingane, kunokungaqiniseki okuncane i-Orlando ingenye yezindawo ezinhle kakhulu zomndeni zokubalekela eFlorida. Akunandaba noma ngabe usesha ukuphela kwamabili noma kwamathathu kwesonto, i-Orlando ngokufanayo iyisinqumo esimangalisayo.
Tshala amandla akho maphakathi nedolobha i-Orlando, udle ngokubuka esikhaleni esikwi Wheel eSymbol Park, noma ukhumbule ubuntwana bakho kwenye yezindawo ezaziwayo amapaki okuzijabulisa.
Kulapha lapho iWalt Disney engenakuqhathaniswa yenze khona okuphenduke ipaki yokuzijabulisa evakashelwa kakhulu futhi eyaziwa kakhulu emhlabeni: iWalt Disney World.
Amapaki amane ahanjiswe enjongweni eyodwa engakholeki yaseFlorida, iWalt Disney World inikeza konke okudingekayo ohambweni olungajwayelekile lwaseFlorida.
Lokhu kusuka kuma-rollercoasters ajabulisayo nokugibela, amapaki wamanzi amnandi, ukuhlangana okuvelele okuphumuzayo nokudla okuphezulu.
Futhi, kunezitolo eziningi, izivivinyo zemidlalo (igalofu likhulu kakhulu lapha), ukuzijabulisa nemikhosi, kanye nengxenye yezindawo zokungcebeleka eziphezulu eFlorida lapho zizoshayisa khona wonke lawo mandla.
3. IHawks Cay Resort - Ukhiye wedada
Imibhangqwana efuna ukuzijabulisa izothandana nayo IHawks Cay Resort, i-oasis engamahektare angama-60 ethathwa njengenye yezindawo zokungcebeleka ezinkulu eFlorida.
Uma une-marina yensizakalo ephelele nenqwaba yemisebenzi etholakalayo, ngeke ube nesithukuthezi kukho konke ukuvakasha kwakho.
Imisebenzi efana ne-snorkeling, ukudilika emanzini, ukubhukuda ngamahlengethwa, kanye ne-kayaking eziqhingini ezishisayo ezizungezile ziyatholakala.
Ngemuva kosuku lwenjabulo, phumula echibini labantu abadala kuphela nge-mojito eqabulayo noma hlela ukwelashwa komzimba opholile eCalm Waters Spa.
4. Izindawo Ezinhle Zokuphumula Zemibhangqwana: I-Key West
Ukuvakashela eKey West yilokho okuchazwa nguchwepheshe wokudumisa. Isimo sezulu esifudumele, umoya ohehayo ohehayo, ulwandle oluthambisayo, kanye nokuhlwa okuhle kwenza indawo ekahle yokuhlanganyela ohambweni olusuka enhliziyweni eFlorida imibhangqwana ekude kakhulu nokuphila okumatasa.
Endaweni eseningizimu kakhulu ye-Daylight State, iKey West ingesinye seziphetho ezisuka enhliziyweni zohambo lwamaviki eFlorida Keys olunikeza impilo yasebusuku enamandla, iziqhingi ezingajwayelekile nolwandle, ukudla okwahlukahlukene, kanye nobubanzi obubanzi bokuzivocavoca okubili noma okuthathu.
Imisebenzi esuka enhliziyweni eKey West
I-Key West ihlukaniswe ngaphandle kokukhukhuleka nokuhamba ngomkhumbi. Imibhangqwana ingaqasha isikebhe noma ikhethe ukuvakashelwa komhlangano futhi iphenye ngamanzi.
Amalanga kusiKhiye saseNtshonalanga angomunye umhlaba. Kuzizwa kusuka enhliziyweni uma uyazisa ngesithandwa sakho ngenkathi unambitha isiphuzo esishisayo.
Bheka i-Key West Beacon edumile, enye yamabhekhoni amahle kakhulu eFlorida. Izivakashi zingakala izigaba ezingama-88 zaphezulu futhi zidle ngokubuka okumangazayo kwedolobha nolwandle kusuka phezulu.
I-Key West nayo idume ngomqhele wamakhorali wayo omuhle. Bamba indawo yokuvakasha kokubhukuda noma kwe-scuba bese uhlanganyela ekuhlanganyeleni kwanoveli kwezivakashi zamakhorali nezinye izilwane zasolwandle.
Ukuhlangenwe nakho kosuku lonke, bhuka ukuvakashela eDry Tortugas okutholakala kalula nge-seaplane. Thola lesi siqhingi esikude, izinsalela zeNqaba iJefferson, nezinye izivivinyo zokuhlangenwe nakho.
5. ICheeca Lodge & Spa
Kuzinze esiqhingini esithathiwe sase-Islamorada, indawo evinjelwe ehlanganiswe amanzi aluhlaza agcwele impilo yasolwandle futhi aziwa njalo njenge- "The Sportfishing Capital of the World,"ICheeca Hotel ukuphunyuka okuhle eFlorida kulabo abadinga ukwamukela ubuhle bemvelo.
Amakamelo ezivakashi kanye nama-suites ayisiphethu esiwugwadule sokuphumula nokuziduduza kanye nokufakwa ngaphakathi kwama-elementi kanye nengqikimba yesimanje yesitayela se-West Indies enemibhede ye-jumbo, izindawo zokugeza zemabula, ama-wraparound amahle, nemipheme yangasese enganaki ulwandle, ichibi lamanzi, noma i-fairway ephelele.
Izinto ezilula zamanje zifaka ama-TV angama-42 ″ e-plasma-screen nabadlali be-blue ray, kanye nokuphathwa kwamagumbi angama-24. Uma kwenzeka unethemba lokuphumula eFlorida kwelinye lamahhotela aphambili, uCheeca Cabin uyisinqumo esimangalisayo.
Ibhishi lolwandle elizimele elinentende yesundu nedamu elihle kakhulu kuyindlela enhle yokuphola, ehlanganiswe neziphuzo ezixubekile ezivela kubha yephuli.
Thatha indawo ebanzi yezindawo zamanzi ezibandakanya ukubhukuda, ukulayishwa kwephayiphu, ukuhamba ngohambo lokuhamba ngomndeni, ukuvakasha kokudoba komndeni, nokuhamba ebusuku, noma ukukhulula ngemithi evulekile e-elite spa nokugxila kwe-wellbeing kukushiye ukhululekile futhi uvuselelwe.
6. Izindawo ezihamba phambili zokungcebeleka zemibhangqwana: The Breakers
Uma kwenzeka ufuna ukuphunyuka ngokweqile eFlorida, setha ePalm Seashore ngemibono ejabulisayo ye- I-Atlantic Sea, iBreakers Resort inikeza isitayela nokucwengwa.
Ubulula obukhethelwe kahle futhi obumnandi bufakwa ebangeni lamakamelo wokuzikhethela nama-suites ahlotshiswe ngamathoni acebile, abushelelezi nezimpahla ezingenisiwe.
Njengoba kunezindawo zokuhlala zasendlini ezingaphandle, nokungena kolwandle okungena ngaphakathi, lawa ma-suites ahlinzeka ngokweqile ngamunye ukuqinisekisa induduzo nokuthula okuqondile, kufaka phakathi amakamelo okugeza amatshe amnandi, aqokomisa amapayipi ajulisayo namanzi ahlukaniswe ngengilazi.
Izwa ukudla okungcono kakhulu okuseduze nokwasemhlabeni kwenye yezindawo zokudlela eziyisishiyagalombili, ezinikela ngamamenyu amasha abonisa izinkathi ezishintshayo nenala yeFlorida.
Kusukela kuma-steaks amnandi ekhwalithi enhle kakhulu yeFlagler Steakhouse kuya ekutholeni okusha kwansuku zonke kanye nemibukiso yezinhlanzi ezintsha eThe Fish Bar, konke ukufisa kwakho okuphekiwe kuzofinyelelwa.
7. ISanibel Island
Isiqhingi saseSanibel yindawo esuka enhliziyweni lapho imibhangqwana ithanda ukukhumbula khona okuyohlala unomphela. Kuyipharadesi lezithandani, elizungezwe ulwandle lwesihlabathi esimhlophe. Lesi siqhingi esihle semifula esinezithiyo e-Inlet of Mexico sinomlando ocebile nabazimele, amaNdiya aseCalusa, nabahambi baseSpain.
ISanibel Island inikeza izifinyezo zemizwa nokusondelana kwemibhangqwana ngobubanzi bayo bezindawo zokudla ezikhethekile, izitolo, nezilungiselelo zomshado. Ngokwengeziwe, yindawo enokuthula, enokuthula futhi yenza isimo esihle sokuzwela kwenhliziyo ngezinyoni zothando ukutshala amandla ekhwalithi. Isihlabathi salesi siqhingi simangalisa ngokukhethekile.
Imisebenzi esuka enhliziyweni eSanibel Island
Mane nje uphumule ogwini lolwandle noma uzulazule ngasogwini nomlingani wakho ngokungenakuhlukaniswa. Thatha umoya ophelele uzwe ukuthula kolwandle.
Kuyaziwa kahle iSanibel Island neStronghold Myers ngamagobolondo amahle. Ukuqoqa igobolondo nomunye wakho obalulekile kungaba ngokusuka enhliziyweni ngokukhethekile.
ISanibel Island iseduze kakhulu nemvelo. Izithandani zithanda ukuvakashela i-JN “Ding” Sweetheart Public Untamed Shelter yokuphila okubandakanya ukuhlanganiswa kwempilo ejwayelekile yemvelo phakathi komhlume, amachibi, namakhilogremu. Le yindawo ekahle yokuthatha izithombe ezimbili noma ezintathu.
Zama ukungaphuthelwa ukulala ebusuku ogwini lolwandle lwaseSanibel Island naseStronghold Myers. I-Bowman's Seashore neSanibel Beacon Seashore yizindawo ezimbili zasebusuku ezaziwayo ezazi ukuthi siphakamisa ukuthi.
Imibhangqwana yaseShopaholic kufanele ivakashele eSitolo eSanibel ukuthola izitolo ezithile ezimangazayo nezindawo zokudlela.
Izizinda ze-Butterfly yindawo enhle yokwazisa imvelo nokubona izinhlobo ezahlukene zezimvemvane ezikhazimulayo.
8. Izindawo ezihamba phambili zokuvakasha zezithandani: Ukhiye omncane wethoshi
Imibhangqwana efuna ukuthula nokuthula izokujabulela ukuhlala kwayo eLittle Palm Island Resort & Spa. Ngokusho kwezivakashi zangaphambili, le ndawo yaseFlorida Keys iqala ukusebenza Ukhiye Wethoshi Elincane, etholakala ngamamayela angu-27 enyakatho-mpumalanga yeKey West, ibonakala njengezulu.
Ihhotela labantu abadala kuphela abathi linikeza “inhlanganisela ekahle yokuba wedwa nobuhle” futhi litholakala kuphela ngezindiza zasolwandle noma ngesikebhe (okugcina okukhokhwa ngemali engu-12.5% ​​yemali yokuvakasha nsuku zonke).
Izivakashi zizothola uphahla olukhuphukayo, izivalo zamasimu, amatafula azimele, kanye nezihlambi zasendlini nangaphandle kwelinye lama-bungalow suites aphefumulelwe aseBrithani.
Ngaphezu kwalokho, amafulethi e-premium anezindawo zokugeza zethusi ezingaphandle kanye nokufinyelela kwangasese ebhishi elinomgodi womlilo.
9. INaples Grande Beach Resort
Indawo yokuvakasha yeNaples Grande Beach, enye yezindawo zokungcebeleka eziphezulu ze-spa eFlorida, ilele ebangeni elingamakhilomitha amathathu ogwini olunesihlabathi esimhlophe lapho wena nothandekayo wakho ningacwila khona izinzwane zenu esihlabathini ngasese se-double-lounger yakho.
Bhukuda echibini labo labantu abadala kuphela, bheka impilo yasemanzini phezulu kanye neyakho ku-kayak, noma ubhontshisi ekushoneni kwelanga kwezothando kusuka ekuvikeleni kuvulandi wakho.
Ngemuva kokuthatha indawo yokubuka iGulf of Mexico, chitha intambama uziphumulele endaweni yabo ethokomele yosuku lwezinto eziphilayo.
10. ISouth Seas Island Resort - iCaptiva Island
Indawo Yesiqhingi YaseNingizimu Seas Island kuhlanganisa ukuphela komunye umkhawulo wesiQhingi esihle saseCaptiva, enezinqola zokuthokozela ezizohamba.
Imibhangqwana ingakujabulela ukuqashwa kwamabhayisikili, izifundo zokuhamba ngomkhumbi, ama-kayak wokuhlola ama-mangrove, namabhavu ashisayo echibini lamachibi ukuphumula ngemuva kosuku lokuzijabulisa, ngaphezu kogu oluhle kakhulu lwamakhilomitha angu-2.5 ogwini oluhlanzekile.
Thatha uhambo lokuhamba ngesikebhe sothando uzungeze iCaptiva Island neCayo Costa National Park ukuthola ithuba elilodwa lokuphila lokugoba nokubuka amahlengethwa. Kulula ukuqonda ukuthi kungani le kuyindawo oyithandayo yokuya ku-Florida honeymoon.
11. IConch Republic
I-Key West-mhlawumbe indawo enhle kakhulu ongayivakashela eFlorida kubantu abadala abafuna ukuphunyuka okuphela-kwe-kweviki okuhamba ngokushesha, uma usunolwazi, awunakwa kahle.
Ngaphezu kweqiniso lokuthi lesi yisiqhingi esincane esishisayo idolobha eliseningizimu kakhulu, futhi singesinye sezindawo ezingena kakhulu kuze kufike ezinhlobonhlobo zaso.
Inhlanganisela ethokozisayo ye- I-Caribbean neYurophu zithinta - eceleni kwengxenye enkulu yeNingizimu uma kungenzeka - lapha, uzolandela iqoqo lezinto ezingenakuphela ezikhuthaza ama-buds wokunambitha futhi zihlanganyele namandla.
Ingxenye enkulu yamandla igxile kuDuval Road onomdlandla, umgwaqo ongamamitha angu-1.25 ubude ovumela abantu abahamba ngezinyawo ukuthi bahambe ukusuka ogwini lwe-Inlet yaseMexico baye e-Atlantic.
Endleleni, kukhona konke okungahle kudingeke ukukugcina umatasa ngesikhathi sokuphunyuka kwakho kokuphela kwesonto, kusuka kumculo oqhutshwa yiCuba nokupheka uyothenga embukisweni wobuciko nobuciko bezitolo (noma, ngaphandle kwalokho, izitolo zezipho ezinganambitheki) .
Bese kuthi ngaleso sikhathi, kube khona kusihlwa okumangazayo, okunconywa ngokulangazelela njalo kusihlwa eMallory Square ngezethulo zokuzivocavoca kanye ne-busking
12. IMargaritaville Hollywood Beach Resort
IHollywood Seashore Broadwalk, iMargaritaville Hollywood Seashore Resort iyindawo eyisimanga yokubuyela emuva nokuphambukisa okushukunyiswa amavesi nendlela yokuphila yomculi, umculi, nomdali uJimmy Buffett.
Ukubuyela emuva kufaka phakathi inhlanganisela yamasudi kanokusho namakamelo avumelekile acetshiswe emaphandleni apholile asebhishi abukisa izindlu zokugeza ezinamanzi emvula namabhavu amanzayo. Izembozo ezizimele ezizimele zifaka phakathi ukubona okuhle kolwandle.
Emini, hlala ubungako bokuzivocavoca okusekwe ogwini lolwandle, ngokwesibonelo, ukuntweza phezu komzimba, ukugibela igwedlo, nokuntweza ku-FlowRider.
Cishe ngezikhathi zakusihlwa, bheka isigcawu sesishiyagalombili sokuzitika esidlidlizile nesokuphambukisa endaweni ebuyayo, kusuka ku-steak emangalisayo newayini e-JWB Prime Steak naseFish ukusayina iziphuzo ezixutshiwe eLandShark Bar naseBarbecue, noma ngehora lesihlanu futhi Izoso.
13. I-Clearwater Beach
Ngokuhlanganiswa kwesimo sezulu esimangalisayo, ugu lolwandle oluhle, nokuhlangenwe nakho okuningi, I-Clearwater yindawo ekhethekile yobusuku bokuqala eFlorida.
Kutholakale ama-45 kuphela asuka eTampa Worldwide Air terminal, leli dolobha lolwandle laseFlorida lihlala esiqhingini sokuvimbela futhi linikeza ukuthengwa okuningana, ukudla okuphezulu, izivivinyo zamanzi, nokuningi kokuheha ongakwazisa.
Imisebenzi esuka enhliziyweni e-Clearwater Seashore
Kusuka e-Clearwater Seashore Metropolitan Marina, Izithandani zingavumela ukuvakasha kwesikebhe ngasese noma zibhukhe uhambo lokuvakasha, noma okuhlangenwe nakho kwamahlengethwa.
Ufuna okuthile okunesibindi ngokwengeziwe? Ungakhetha ukuvakasha kwe-paddleboard noma ukuvakasha kwe-kayak futhi unxenxe ithuba lokuba seduze nemvelo nempilo engahlanjululwanga.
Shaqisa othandekayo wakho ngokubhuka itafula lesidlo sakusihlwa esisuka enhliziyweni eCaretta ku-Inlet. Kuyindawo yokudlela enethezekile futhi evuthwa kamnandi ngokuzizwa okuhle.
Thatha isikebhe esisuka enhliziyweni eLake Tarpon, ichibi elidumile eFlorida elithole ibanga elifushane ukusuka olwandle lwaseSlewater.
Eyaziwa ngamanzi ayo aluhlaza okotshani, ulwandle olunesihlabathi esimhlophe, impilo yasebusuku yasendle, iqembu labantu baseCuba, kanye nendawo yokudla emhlabeni wonke, iMiami ingesinye seziphetho ezisuka enhliziyweni zokuphunyuka eFlorida. Ngokuthusayo, uzothola lapha imisebenzi eminingi yamahhala eMiami.
Ngaphandle kokuthi iMiami ngokuvamile idume ngefa layo lomphakathi kanye nemvelo yeqembu, nayo inecala elisuka enhliziyweni. IMiami cishe inezindawo ezinhle kakhulu zolwandle zaseFlorida zemibhangqwana.
Kufanele uvakashele Miami ukuhlangabezana nohambo lwezithandani oluhamba phambili eFlorida. Izindawo ezisuka enhliziyweni kakhulu zaleli dolobha le-Enchantment zikhumbula izizinda ezingagcotshiwe zezingadi ze-Italian Renaissance kanye namahlathi amnandi emhlume anganikeza imibhangqwana imizuzu yomuntu phakathi kokuthula kwemvelo.
Imisebenzi esuka enhliziyweni eMiami
Awungeke uvakashele eMiami ngaphandle kokuphenya ngeMiami Seashore. Tshala imali ethile ekukhuliseni amandla ogwini lolwandle noma umane uhambe endleleni yezinyawo eMiami Seashore. ISouth Seashore ingaba yindawo ekahle yabantu abafuna ukuphunyuka okusuka enhliziyweni eFlorida kwemibhangqwana.
Ngokuhlwa okusuka enhliziyweni, bhuka i-Dusk Voyage ngeBiscayne Narrows naseSouth Seashore.
Imibhangqwana ingaqasha amabhayisikili ezitolo eziqashisayo zamabhayisikili futhi iphenye leli dolobha elisuka enhliziyweni eFlorida ndawonye. Isifunda saseSouth Seashore sinendawo ekahle yokugibela amabhayisikili.
Imibhangqwana yama-Foodie ingazijabulisa ngokuvakashelwa okusemthethweni kokudla namasiko aseCuba eLittle Havana. Kuyithuba elimangalisayo lokufunda isiko laseCuba.
Bheka iSouth Pointe Park Dock enikela ngemibono engcono kakhulu ehlanganisa konke olwandle ngomkhathi wedolobha njengendawo enhle.
Bhuka isigaba sokupheka futhi nithole isipiliyoni esisebenzayo ndawonye kolunye ubuchwepheshe bokupheka. Kumnandi nje ngokusuka enhliziyweni.
15. Izindawo Ezinhle Zokuvakasha Zezithandani: Isekisi eSarasota
Kusetshenzwe yi ISarasota-Bradenton Global Air i-terminal, idolobha langaphambilini le-bazaar laseSarasota lenza ukubaleka kokuphela kwesonto okujabulisayo kwemindeni efuna inhloso yolwandle engavamile.
Ngaphandle kwelanga nesihlabathi sayo esimnandi, iSarasota yaziwa njengendawo yakudala yaseRingling Siblings Carnival, enefa elihlala kuze kube namuhla.
Ngokuvamile okuhlaba umxhwele phakathi kwezinkomba eziningi eziya kumaRinglings yindlu kamnandi yaseCa d'Zan.
Leli khaya langaphambilini lendlu kaJohn Ringling njengamanje liyihholo lombukiso elingenayo eligcwele izinsalela ezithakazelisayo nezimpahla futhi liyisiqeshana se-The Ringling, umhlangano wezindawo ezikhangayo ngokufanayo ezifaka imidwebo ezinikele ekuzikhetheni okukhethekile komndeni kanye nasemuva komlando webhara.
Kungukuhlangana okuthakazelisayo, okunengqondo ezinganeni njengoba kungabantu abadala… kodwa-ke, lungela ukuchitha ingxenye enkulu yosuku lapha.
phetho kungaba yinhloso elandelayo yemibhangqwana efuna ukuphunyuka olwandle okusuka enhliziyweni eFlorida. Leli dolobha lolwandle laseFlorida ligudla ulwandle olunesihlabathi esimhlophe namanzi aluhlaza okwesibhakabhaka.
I-Destin inesikhalazo sayo futhi inikeza izivakashi izimo zezulu ezifanele unyaka wonke nokuvakasha okumbalwa kokuvakasha.
Phakathi kwezinto eziningi ezehlukene, iDesin iyaziwa ngokuhlala kwayo okungahleliwe okusuka enhliziyweni, iHenderson Park Hotel. Bhuka ukuphela kwesonto endlini enhle yokuqashisa ubusuku bonke bese udla isidlo sasemini esisesibhakabhakeni sesinqumo sakho kusihlwa ngesitayela sohambo olwandle.
Thatha elinye lamabhayisikili amaningi okuhlinzekwayo okuncane okuncane futhi ugibele endaweni enhle noma emgwaqweni omuhle wasolwandle. Ngamabhishi amatshe amnandi, ayigugu, kuzodingeka ukuthi uhlanganyele emidlalweni eminingi yamanzi, njengokuhambahamba ngomkhumbi nokuhamba ngesikebhe uvakashele isikebhe.
Imisebenzi Yezothando eDestin
Letha amathawula ambalwa bese udla ohambweni olubuyiselwe emuva nomuntu ohamba naye ohlangothini olumhlophe olunoshukela olwandle lwaseDestin. Noma-ke uphinde uhambehamba emabhishi uqoqe amagobolondo.
Bhuka ukuvakashelwa kwezindiza ezinophephela emhlane kusuka kuTimberview Choppers ngombono wamamitha ayi-10,000 XNUMX waleli dolobha elihle nokungena. Inikeza cishe imibono emihle kakhulu eDestin Harbour, e-Okaloosa Island, ePanama City nakwezinye izindawo ezinhle.
Thatha isithandwa sakho ohambweni lwasebusuku olusuka enhliziyweni ukuvakashela i-Emerald Coast. Yidla ubukhazikhazi obujwayelekile buthule beDastin Harbour, iChoctawhatchee Bay, neCrab Island kusihlwa.
Zibandakanye nosuku olusuka enhliziyweni eMarina Bistro, indawo yokudlela emangalisayo enganaki iTheku. Ukwenza usuku lwakho lubucayi, banokukhetha okulula kokudla kwakusihlwa futhi.
17. Izindawo ezihamba phambili zokuvakasha zezithandani: Ibhishi laseSanta Rosa
Isesha uhambo lwesikhumbuzo eFlorida? Kutholakale ku- Isifundazwe saseNingizimu Walton, iSanta Rosa Ukuphunyuka okwaziwayo okusuka enhliziyweni enyakatho neFlorida okunikeza izinqwaba zokuzivocavoca nokuheha okulungele imibhangqwana.
Njengoba inamamayela angama-26 esihlabathi esimhlophe, esimnandi namanzi amnandi olwandle oluluhlaza, iSanta Rosa Beach kungenzeka ibhishi elihle kunawo wonke eFlorida lemibhangqwana.
Uma kwenzeka usuka enhliziyweni futhi ufuna ukuhlala ngokusuka enhliziyweni ngobusuku obukhethekile bokuqala eFlorida, kufanele uvakashele eSanta Rosa. Idolobha lichichima yimibukiso yobungcweti eseduze, ukudla okumangalisayo, ukusebenza kwamabhodlela, amapaki wombuso, nokunye okuningi.
Imisebenzi Yezothando eSt Nick Rosa Beach
Amanzi olwandle olwandle olwandle olumhlophe noshukela alungele abazulazulayo. Kusukela ekubhukudeni kuya ekugibeleni nge-paddle kanye ne-kayaking, imibhangqwana izothola izindlela eziningi zokuba nezikhathi ezimnandi ndawonye.
Nambitha isiphuzo esivuselelayo bese uphenya idolobha e-Emerald Coast Pedal Visit.
I-Seaside Ridge Lake iyinto yokuvakasha edingeka ngokuphelele eSt Nick Rosa Beach. Lesi ngesinye sezindawo ezimbalwa kulo lonke iplanethi lapho ungabona khona lesi simanga esijwayelekile.
Jabulela i-spa yombhangqwana. Buyisela umoya wakho nomzimba ngokuthambisa emuva noma ukwelashwa komzimba ekuphunyukeni kwakho okusuka enhliziyweni eFlorida.
Idili endaweni ephezulu eSt Nick Rosa Beach Goatfeathers Fish Eatery naseLa Crema Tapas Bar bobabili badume ngokukhethekile lapha futhi babhekana nezinhlobonhlobo zezinhlanzi ezimnandi nezitsha zasemaphandleni.
18. Ibhishi iSt. Pete: UDon CeSar
Akunandaba noma ngabe wena nalabo ohlanganyela nabo nithanda izinganekwane ezikhuthazayo zothando noma nje kudingeka niphumule nibalekele kude nolwandle olungcono kakhulu lwaseFlorida, I-Wear CeSar ifanelwe ukuhlala.
Kuvulwe engxenyeni yokugcina yama-1920 njengenhlonipho yothando lomhlaba olulahlekile lukaThomas Rowe, iThe Wear CeSar imema njalo izinyoni zothando ezihambahambayo nemibhangqwana enethemba lokusayina isivumelwano.
Ngemuva kokungena e-Pink Castle, wena nesithandwa sakho nizozizwa sengathi nibuyele emuva ngesikhathi ngenxa yobuqili obudala beFlorida, ngokwesibonelo, izitezi zethayela le-retro, izimpahla ezi-wicker, kanye ne-complement ye-palm leaf complement.
Amandla we-Thundering '20s acace bha emugqeni wokungena, osebenzela ukuzimisela kweziphuzo ezixubekile namacwecwe amancane emini. Ukuze uthole ukusethwa okusuka enhliziyweni, thola okumnandi endaweni efriziwe yeyogathi ukuze uthokoze olwandle ngenkathi ubukele ukushona kwelanga, noma uthinte omunye
Imigodi yomlilo ovulekile weRowe Bar. IMaritana, ikhefi eyinhloko, iyindawo ongaya kuyo uma ubusuku bakho obufanele edolobheni ubandakanya ukukhuphuka nokwazisa izinhlanzi ezazi kahle.
Ngokulandela ukwanelisa ukufisa kwakho noma ukucisha ukoma kwakho, hamba uyofuna i-dunk kwelinye lamachibi amabili angaphandle, uzonakalise e-spa eyi-11,000-foot-spa noma uthole amabhayisikili wababolekisi – okukhokhiswa imali engu- $ 36 yansuku zonke –ukubheka okukhangayo okuseduze I-Fortress De Soto Park, isigaba se-1,136 sepaki yomhlaba esihlala ngaphansi kwamamayela ayi-7 eningizimu yendawo.
19. Ezothando lukaSt Augustine
Enye yezindawo ezisenyakatho nedolobha elisempumalanga ye-Daylight State, St. Augustine ngokungezelelwe ingenye yesizini kakhulu.
Hhayi nje ukuhamba ngehora ngaseningizimu neJacksonville, leli dolobha elihle elibiyelwe ngodonga lasungulwa ngekhulu leshumi nesithupha ngabaseSpain futhi lathola ukuthi lingabamba kanjani ukuvutha kwalo kwaseYurophu.
Indawo ebaluleke kakhulu ngokomlando nayo iyikhaya lezindawo zokulala ezahlukahlukene ezisuka enhliziyweni, amahhotela, nezindlu zezivakashi, futhi kuyathandeka ukuvakashela ukuhola iphakethe kuze kufike kuKhisimusi.
Ngalesi sikhathi senjabulo, imigwaqo ikhanyiselwa kumthelela okhohlisayo - muhle kakhulu ukuthi isize ukuma kukakhonkolo ukuma kukaSt Augustine "njengedolobha elihle kakhulu likaKhisimusi eFlorida."
Yindawo enhle yokuphenya ngokuhamba ngezinyawo (uzodinga ukushiya imoto yakho kwesinye sezifunda ezishiya emaphethelweni futhi uthathe ezokuthutha uma kungenzeka ihlale), ikakhulukazi ezungeze i-Frontier Quarter yakudala.
Isindiswe kakhulu njengoba bekungaba seminyakeni eyikhulu neshumi nesikhombisa neshumi nesishiyagalombili leminyaka, lesi sifunda esithakazelisayo sikhombisa impilo esikhathini esithile esedlule. Kunamaphuzu ahlukahlukene okugxilwa kuwo lapha, ikakhulukazi inqaba esindiswe kakhulu yeCastillo de San Marcos.
20. Izindawo ezihamba phambili zokuvakasha zezithandani: i-Amelia Island
IFlorida iyikhaya leziqhingi ezahlukahlukene, noma kunjalo, zimbalwa ezithandekayo njengezithandekayo Isiqhingi sase-Amelia. Kutholakale ngaphansi kwamamayela angama-34 ngenhla empumalanga yeJacksonville, lesi siqhingi esisenyakatho-mpumalanga yeFlorida siheha ngababili befuna amabhishi alahliwe izimila ezicebile nokuzivocavoca umzimba okuxegayo.
Imibhangqwana izokuzwa ngokushesha konke okuvela eqinisweni njengoba ihamba ngaphansi kwezihlahla ezimbozwe uhlaza lwaseSpain ezisiza ngokushintsha lesi siqhingi sibe intwasahlobo yasogwadule.
Ngokwengeziwe, amabhishi enhloso amamayela ayi-13, aqhakambisa isihlabathi se-quartz esintekenteke se-Appalachian, engeza esikhalweni salo esincomekayo. Imibhangqwana ingabheka kulesi siqhingi ngokuqashisa amabhayisikili kumphakeli osemthethweni onjengeSuperCorsa Cycles ongayisebenzisa kumamayela aso wezindlela ezijikajika zasemanzini.
Imizila yabo bonke abantu abasuka kumfundamakhwela kuya kwabagibeli bamabhayisikili abahamba phambili baya ezindaweni ezahlukahlukene esiqhingini, noma kunjalo, inkambo yamamitha ayi-6 edlula eStronghold Secure State Park idume kakhulu.
Ngesikhathi lapho izinyoni zothando zidinga ikhefu ekuhambeni endaweni yokuzilibazisa, zingaphenya isikhathi esiNgqubuzanayo Sokuqina Kokuvikela noma zifune amagobolondo namazinyo oshaka emabhishi ayo.
Imibhangqwana nayo ingakhetha ukubeka amahora ambalwa ishaya ukuxhumana kwenye yezindlela ezinhlanu ezidumile zase-Amelia Island noma iya ePeters Direct Beach Front Park ukubuka ukushona kwelanga ngenkathi igibele amaponi.
Ngenkathi singahle sihlose iVirginia yabathandekayo kanye neLouisiana kungaba yisimo lapho ufikelwa umxhwele ongenathemba futhi, iFlorida yiDaylight State – futhi iqhakambisa izindawo zokubalekela lokho kuheha kohlobo ngalunye lwezithandani.
Imibhangqwana yama-Nostalgic ingakwazi ukuhambisa ubusha bayo emapaki ezokuzijabulisa eFocal Florida, izinyoni zothando ezifuna ukuphepha zingaluthola ilanga kwezinye izihlabathi ezilahlekile, futhi izigqoko zomlando zingahamba ngokungahlukaniseki ngokusebenzisa imiphakathi ekhohlisayo engazikhukhumezi.
Sicela ushiye amazwana, njengale ndatshana ku-Best Vacation Spots for Couples, bese utshela abangane bakho nomndeni wakho ngakho!
Tags:ezingabizi zokubaleka kwezothando i-florida, amaphakheji weholide lolwandle lwase-florida, Izithandani zase-florida zihlala konke okubandakanya, ukufihlwa kwezothando okufihliwe eFlorida, amaholide amancane e-florida, izindawo zokuphumula ze-florida, izindlela ezihlukile zokuphumula ngempelasonto e-florida, izimpelasonto ngempelasonto eFlorida yemindeni
Izindawo Eziphezulu Ezihehayo Ezinhlanu Nezinto Okufanele Uzenze e-Columbia, SC
I-Arik Air Flight kanye Nendlela Yokubhuka Indiza Yokukhululeka ngo-2020
Izinzuzo nokubi kokuhlala emizini yaseFlorida